Ekwekwala Ka Ndị Enyi Gị Rata Gị Ka I Mee Ihe Ọjọọ | Ndị Na-eto Eto
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikongo Kiluba Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Gịnị Ka M Ga-eme Ma Ndị Enyi M Na-agwa M Ka M Mee Ihe Ọjọọ?
Ihe mbụ i kwesịrị ime bụ ịmata na ọ sọgodị ya ya bụrụ na ndị enyi gị na-eme ihe na-adịghị mma, ihe gịnwa metara dị gị n’isi.
Ihe nke abụọ bụ ịmata ihe na-akacha arata gị ime ihe na-adịghị mma.
Ihe ọzọ bụzi, jụọ onwe gị, sị, ‘Olee ebe ọ na-akacha adịrị m mfe ime ihe na-adịghị mma?’ (Ọ̀ bụ n’ụlọ akwụkwọ? Ka ọ̀ bụ n’ebe m na-arụ ọrụ? Ka ọ̀ bụ n’ebe ọzọ?) Ọ bụrụ na ị mata ebe ọ na-akacha adịrị gị mfe ime ihe na-adịghị mma, o nwere ike inyere gị aka ka ị ghara ime ihe na-adịghị mma.
Ugbu a, olee ihe ị ga-eme? Ihe mbụ bụ na i kwesịghị ịnọ n’ụdị ebe nwere ike ime ka i mee ihe ọjọọ. (Dị ka ihe atụ: Ọ bụrụ na ọ na-abụkarị ị na-ala akwụkwọ, gị ahụ ụmụ akwụkwọ ibe gị ga na-enye gị sịga ka ị ṅụọ, i nwere ike ịna-esizi ụzọ ọzọ ala.) Nke bụ́ eziokwu bụ na ndị ọ bụla sị na ha bụ ndị enyi gị ma ha ana-agwa gị ka i mee ihe na-adịghị mma abụghị ezigbo ndị enyi gị.
Mgbe ọ bụla i kwere ka ọnwụnwa merie gị, ị na-agbara ọchịchọ gị ohu
Ọ bụ eziokwu na ị gaghị agbanahụcha ihe niile nwere ike ime ka i mee ihe ọjọọ. Otu ụbọchị, i nwere ike ịhụ ihe nwere ike ime ka i mee ihe na-adịghị mma. O nwere ike ịbụ na ị tụtụghị anya ụdị ihe ahụ. Olee ihe ị ga-eme?
Ihe kacha mma ị ga-eme bụ ijikere ejikere!
Chebaragodị ihe a echiche: Jizọs ma ebe ọ kwụ ma a bịa n’ihe gbasara ime ihe ọma na ime ihe ọjọọ. O kpebisiri ike irubere Nna ya isi mgbe niile. (Jọn 8:28, 29) N’ihi ya, ihe ị ga-ebugodị ụzọ mee bụ ị mara ebe ị kwụ.
Ihe ị ga-eme. Legodị ma ị̀ ga-echeta ihe abụọ kwesịrị ime ka ị ghara ikwe ka ihe ọ bụla mee ka i tinye aka n’ihe ọjọọ. Lezie ma ị̀ ga-echeta ihe abụọ i nwere ike ime ga-enyere gị aka ka ị ghara itinye aka n’ihe ọjọọ.
I kwesịghị ịgba nkịtị ka ndị ọzọ na-atụrụ gị ụka. Kata obi mee ihe ọ bụla ị ma dị mma. (Ndị Kọlọsi 3:5) Na-arịọkwa Jehova ka o nyere gị aka ịna-eme ihe dị mma.—Matiu 6:13.
Ụfọdụ isiokwu ndị dị n’akwụkwọ a kwuru gbasara ụlọ akwụkwọ, ntụrụndụ, ndị ọgbọ gị, papa gị na mama gị, mgbanwe ndị ị na-enwe n’ahụ́ gị, otú obi na-adị gị, na okwu nwoke na nwaanyị.
Ndị ọgbọ anyị nwere ike ime ka anyị mewe ihe na-adịghị mma. Gịnị ka i kwesịrị ịma banyere ya, olee otú ị ga-esi merie ya?
I kweta ka gị na enyi gị nwee mmekọ nwoke na nwaanyị, ò nwere uru ọ ga-abara gị? Ị̀ ga-akwa mmakwaara?